Kullane Jiis oo lagu eedeeyay dilka Askari Soomaaliyeed | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliye ku-xigeynkii hore ee Hay’adda Sir-doonka iyo Nabad-sugidda Qaranka, Gen Cabdalla Cabdalla, ayaa Cabdullaahi Aadan Kulane Jiiska, oo ka tirsan NISA, saaxiib dhowna la ah Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ku eedeeyay dilka mid ka mid ah askartii ciidamada Dowladda ee ku biiray ciidanka Bad-baado qaran ee ka soo horjeeday muddo kororsigii, kaas oo meydkiisa laga helay agagaarka Iskuul Buluusiya.
Jenaraal, Cabdalla Cabdalla, ayaa sheegay in Farmaajo ogyahay cidda dishay AUN Maxamed Mukhtaar Sheekh, Maxamed, oo ahaa Askari ka tirsanaa NISA, wuxuuna xusay in Kullane Jiis, bixiyay amarka lagu dilay Deeqow, wuxuuna ku eedeeyay in uu sidaan oo kale dad badan meydkooda ku soo tuuray waddooyinka Caasimadda iyo hareeraheeda.
Farmaajo waa ogyahay kuwii dilay AUN Askari Deeqow ee hadana godka qashinka ku riday. Kullane Jiis oo bixiyay Amar lagu dilay, asagoo ka gows haysta Farmajo iyo Fahad, hore ayuu kuwo badan sidaan oo kale kusoo tuuray meydkooda Ceelasha, Taredishe iyo Suuqa-xoolaha.” Ayuu yiri Gen Cabdalla.
Wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay, habka uu u dhacay dilka askariga, kaas oo isaga oo wata labiskii ciidanka la dilay, kadibna meydkiisa lagu soo tuuray god qashin u dhow xarunta tababarka ciidanka Police ka, wuxuuna sheegay in Farmaajo masuul ka yahay maadaama uu awood sharci darro ah siiyay Kullane Jiis.
“Kullane Jiis waa gacanta Farmajo iyo Fahad ay ku adeegtaan, waa ninka bannaanka uga soo shaqeeya ee fuliya dhagartooda!. Waa ninka kaligiis diyaarad u kiraysta inuu qorshe kasoo fuliyo Gedo iyo Baydhaba, waa ninka haya liiskaska dadka ay xukumaan Farmajo iyo Fahad, waa kawaanle hore, haddana dhalinyaro badan si dhagar iyo khiyaano ah u khaarajiyay Kawaanle dadka qala”. ­­Ayuu yiri Gen Cabdalla.
Sida ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen, ehellada Marxuumka, waxaa wacay taliyihiisa oo ka tirsan ciidanka Dufaan loo yaqaan ee toogashada loo tababaray, waxaana loo dilay aano la xariirta sababta uu ugu biiray ciidanka Badbaadada, isla markaana uu ula saftay Taliyihii hore Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Joon.
Marxuumka ayaan wali caddaalad helin, waxaana Magaalada Muqdisho ka socda bannaan-baxyo lagu dalbanayo in Dowladda Fadaraalka soo bandhigto cidii ka danbeysay dilka AUN Maxamed Mukhtaar Deeqow.